Faa'iidooyinka Caafimaad Ee Qaraha Ama Xabxabka - Daryeel Magazine
xabxabka ama qaruhu wuxu kamid yahay cuntooyinka ay dadku ugu jecel yihiin inay cunaan. Marka lagasoo tago dhadhankiisa macaan wuxuu qani ku yahay nafaqooyin badan kuwaasi oo si weyn ugu fiican caafimadkaaga.
Xabxabku wuxuu qani ku yahay oo laga helaa carbohydrates, protoein, fiber, vitamin c, a iyo b. sidoo kale waxa ku jira macdanaha ay kamid yihiin potassium, iron, calcium, magnesium, phosphorus. Iyo sidoo kale sonkoro dabiiciya.
Muqalkan waxan kuugu sheegi doona 8 faa’ido oo qaruhu uleeyahay caafimadka.
Faa’iidada Xabxabka Ee Bisha Ramadaan Faaiidooyinka Cabbitaanka Raqayga (Xamarta) Iyo Ahmiyaddiisa Bisha Ramadaan Faa’iidooyinka Cajiibka Ah Ee Muusku Jidhkeenna U Leeyahay Maxaa Jidhkaaga Ku Dhacaya Hadaad Maalin Kasta Cuntid Karooto Ama Dabo-Case (Carrot)?